Budata Kaspersky Security Scan maka Windows
Budata Kaspersky Security Scan
Free Budata maka Windows (1.90 MB)
Budata Kaspersky Security Scan,
Ihe nyocha Kaspersky bụ ngwa na-enyocha kọmputa gị nke Windows nefu na ngwa ngwa, na-agwa gị gbasara nje na ihe iyi egwu ndị ọzọ dakwasịrị na sistemụ gị, na-enyere gị aka inwetaghachi usoro ahụike.
Nyocha Kaspersky Security bụ obere ngwa nchekwa ị nwere ike ibudata wee nyochaa sistemụ gị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịnweghị sọftụwia nchekwa Kaspersky arụnyere na kọmputa gị. Ngwa a, nke na-arụ ọrụ nke ọma nịchọpụta nje nagbanyeghị obere ya na interface ya dị mfe, na-eji teknụzụ nyocha igwe ojii wee chọta nje zoro ezo na sistemụ gị. Nụzọ dị otu a, a ga -agwa gị ọbụlagodi na ị na -eche ihe egwu nchekwa ọhụụ.
Nnyocha nchekwa Kasperksy, nke nwere ike ịdị njikere nime nkeji ole na ole, nwere ike ịga nihu na-arụ ọrụ na-enweghị mgbagha na ngwanrọ mgbochi nke atọ ma ọ bụ sọftụwia firewall arụnyere na kọmputa gị. Ọ na -enyocha sistemụ gị ngwa ngwa o kwere mee ma dọọ gị aka na ntị mgbe ọ chọpụtara adịghị ike na iyi egwu ọ bụla, na -enye akụkọ ma na -atụ aro maka sistemụ echekwara.
Ngwa nchekwa Kaspersky nefu, Scan Security, na -enweta mmelite kwa ụbọchị iji chekwaa data nkeonwe gị. Ịwụnye mmelite dị ngwa ma dịkwa mfe. Ngwa na -enyocha ya na -akpaghị aka ma ị nwere ụdị ọhụụ.
Nyocha Kaspersky Security bụ ngwa bara ezigbo uru nke nwere ike ịchọta ụdị ihe egwu dị na sistemụ gị namaghị ama wee nye gị akụkọ zuru ezu. Ma ọ bụ nefu, ngwa ngwa na mfe!
512MB nke Ram dị
Dịkarịa ala 480 MB nke ohere efu na draịvụ ike ya
Kọmputa/ihe mmetụ ahụ*
Njikọ Ịntanetị na -arụ ọrụ
Microsoft Windows Installer 2.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
Kaspersky Security Scan Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.90 MB